भदौरे भिरमा स्कारपिओ खस्यो, पाँचको मृत्यु : भदौरे भिरमा स्कारपिओ खस्यो, पाँचको मृत्यु :
भदौरे भिरमा स्कारपिओ खस्यो, पाँचको मृत्यु
२ कार्तिक २०७७, आईतवार ०९:३१ । ओखलढुङ्गा,
ओखलढुङ्गा र उदयपुरको सिमानामा पर्ने भदौरे भिरमा स्कारपिओ दुर्घटना हुँदा ओखलढुङ्गाका दुईसहित पाँच जनाको ज्यान गएको छ ।
भैरहवाबाट ओखलढुङ्गातर्फ आउँदै गरेको बा२०च ७१७१ नं. को स्कारपियो राति १ बजे सिद्धिचरण लोकमार्गमा अन्तर्गत उदयपुरको कटारी नगरपालिका- १४ को भदौरे भिरमा दुर्घटना भएको हो ।
दुर्घटनामा पाँच जानको घटनास्थलमै ज्यान गएको उदयपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक बेदप्रसाद गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार मृतकमध्ये ओखलढुङ्गाको मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका- ९ माधवपुरका ४५ वर्षीय रामबहादुर सार्की र सोही ठाउँकै २६ वर्षीय कर्मे सार्कीको पहिचान खुलेको छ । बाँकी दुई पुरुष र एक महिलाको पहिचान खुलेको छैन ।
रिजर्भ गरेर गाउँ आएको हुनाले पहिचान नखुलेका अन्य तीन जना मृतक पनि ओखलढुङ्गाकै हुनसक्ने प्रहरीको अनुमान छ । अहिले मृतकको शव र दुर्घटनामा परेको गाडी घटनास्थलमै छ । दुर्घटनामा अन्य तीन जना गम्भीर घाइते भएका छन् । दुर्घटनामा ओखलढुङ्गाको मानेभञ्याङ- ९ की २८ वर्षीया कुमारी सार्की, २२ वर्षीया कल्पना सार्की र चालक रुपन्देही त्रिगम्वा नगरपालिका- ४ का २८ वर्षीय पनव खड्का गम्भीर घाइते भएका छन् । उनीहरुलाई थप उपचारका लागि विराटनगर पठाइएको छ ।
१. पोखरामा हिमश्रृखला
२. अभियानकै रूपमा गुर्जो रोप्दै ट्राफिक प्रहरी
३. अर्थतन्त्र ‘भी’ आकारमा पुनः स्थापित हुन्छ : अर्थमन्त्री पौडेल
४. संगीतमा जमेका सन्जोक योन्जन
५. अनिता लामाका तीन कविता
६. इन्स्टाग्रामबाट अबदेखि चार घण्टा लाइभ गर्न मिल्ने